Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana · Desambra, 2018 · Global Voices teny Malagasy
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana · Desambra, 2018
Tantara mikasika ny Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana tamin'ny Desambra, 2018
Iran: Fisamborana mpianatra avy amin'ny elatra havia
Iràna22 Desambra 2018
2- Mitranga ao amin'ny firenena izay manana fifandraisana akaiky amin'ireo mpitarika sosialista ao Amerika Latina, anisan'izany i Hugo Chavez sy Daniel Ortega ny famoretana ireo mpianatra sosialista .
Ejipta: Bilaogera roa nosamborina
Ejipta22 Desambra 2018
Nitatitra ny bilaogy Egyptian Watchman fa nosamborina i Ahmed El Geizawy avy ao amin'ny bilaogy ana Bahebek ya Masr (Tiako ianao Egypt) sy Moataz Adel avy ao amin'ny bilaogy Manfa. Teo am-panatontosana ny fitantarana ny raharaham-pitsarana miaramila iampangana Mpirahalahy Miozolomana any Egypta ireo bilaogera roa ireo.
Arabia Saodita21 Desambra 2018
Mamaly ny Fangataham-pisarahan'ilay Zazavavy Yemenita 8 Taona ireo Mpampiasa Aterineto ao Maghreb
Maraoka21 Desambra 2018
Mamaly lahatsoratra iray navoakan'ny Yemen Times (pejy voafafa) momba an'ankizivavy kely iray 8 taona miezaka mametraka fisarahana ara-panambadiana aminà lehilahy iray 30 taona voalazany fa noteren'ny rainy hovadiany ny bilaogera Toniziana Stupeur!! Un nouveau depart!!.
Ejipta: Tsenabe Iraisam-pirenen'ny Boky ao Caire Andiany faha-40
Ejipta20 Desambra 2018
Tena tia ny volana Janoary i Eman AbdElRahman, indrindra noho ny fisian'ny tsenabe iraisam-pirenen'ny boky ivelan'ny tokonam-baravarany. Anatin'ity lahatsoratra ity, mizara amintsika ny fientanam-pon'ireo bilaogera Ejipsiana hafa amin'io hetsika io izy, eo ihany koa ny fitarainan'izy ireo, sy ny seho ara-kolontsaina eny an-jorony.
Yemen: I Gaza sy Ny Renibeko ary ny Labozia
Maraoka20 Desambra 2018
Miresaka momba ny nampianaran'ny renibeny tia karokaroka azy ireo ny lanjan'ny labozia tanatin'ny fotoana tena nilàn-dry zareo azy i Maysaa Shuja. I Allah anie hampandry am-piadanana ny fanahin'ny renibeny.
Ejipta: Dov'è L'Amore (Aiza ny Fitia)
Andron'ny Mpifankatia ny Alakamisy lasa teo, ary azo antoka fa tsy hamela io fotoana io handalo fotsiny ka tsy hanoratra momba azy ireo bilaogera Ejipsiana, na hanolotra fomba fahandro Mofomamy misy Sokolà (Tarte au Chocolat) hafa kely mihitsy aza ho an'ity andro ity ka hiantso izany hoe "Ilay sakafon'ny Fitiavana".
Ejipta18 Desambra 2018
Iran: Fitokonan'ny bisy sy ireo bilaogera tany Israely
Iràna18 Desambra 2018
(Marihina fa tamin'ny volana Janoary 2006 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy) Niezaka nitarika fitokonana ny mpamily bisy Iraniana mba hanatsarana kokoa ny fepetran'ny asa sy ny famotsorana ny mpitarika ny sendikan'izy ireo. Bilaogy fitantarana hetsika iray, Otobos1 (midika hoe bisy amin'ny teny Persiana ny Otobos), dia noforonin'ny mpanohana ny sendikan'ny bisy...
Arabia Saodita: Tohanan'ny mpiserasera ny Ejipsiana amin'ny fitroarany
Arabia Saodita18 Desambra 2018
Nampindrana ny fanohanany tamin'ny Ejipsiana amin'ny fitroarana manohitra ny fitondran'ny filoha Hosni Mubarak nitondra nandritra ny 30 taona ny mpiserasera Saodiana. Maro ny mijery ireo tatitra ary maneho hevitra amin'ny fivoarana eny an-kianja raha miditra amin'ny andro fahafito ireo fihetsiketsehana lehibe mitaky ny fiovam-pitondrana.